कोभिड–१९ : सङ्क्रमण रोक्न लागे जिल्ला र स्थानीय तह – Sulsule
सुलसुले २०७७ साउन २३ गते १६:२३ मा प्रकाशित
मुलुकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सङ्क्रमण रोक्न सरकारबाट प्राप्त निर्देशन र ऐन नियमले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै जिल्ला र स्थानीय तहले भूमिका बढाएका छन् । आआफ्ना क्षेत्रमा देखिएको सङ्कट विश्लेषणका आधारमा जिल्ला र स्थानीय तह क्षेत्र अनुकूलको निर्णय गर्दै कोभिड–१९ विरुद्ध सक्रिय भएका हुन् । सरकारले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न कोभिड–१९ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई अधिकार दिएको छ ।
आफ्नो इलाकामा आवश्यक निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई समेत छ । सोही अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय तह र जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले आवश्यकतानुसार निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आजसम्म १८ जिल्लाले यस्तो निर्णय गरेर कार्यान्वयन थालेका हुन् ।
मुलुकका धेरै स्थानीय तहले पनि आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यान्वयन गरिरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यकतानुसार जिल्ला र स्थानीय तहले निर्णय गर्ने सक्ने बताइसकेका छन् । उनले मुलुकभर नै बन्दाबन्दी गर्नेतर्फ सरकारले नसोचेको पनि स्पष्ट गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाले जोखिम कम भएर नभई जनजीवन प्रभावित भएकाले लकडाउन अन्त्य गरिएको बताए पनि सावधानी जरुरी छ भनेर सार्वजनिकरुपमै भन्दै आएका छन् तर त्यसको परवाह गरिएको देखिएन । मानिसको चहलपहल बढ्यो, आवतजावन खुकुलो हुँदै गयो । मानिसले लापरवाही गर्न थाले । कोभिड–१९ पूर्ण रुपमा हट्यो भन्नेजस्तो भयो । त्यसपछि विस्तारै कोभिड–१९ ले उग्ररुप लिन थाल्यो ।
साउन १५ पछि पर्यटन क्षेत्रसमेत खुलेका छन् । होटल र रेष्टुराँ पनि सञ्चालनमा आएका छन् । सार्वजनिक यतायातका साधनसमेत खुलेका छन् । त्यसले कोभिड–१९ सङ्क्रमण बढ्नमा सहयोग पु¥याएको देखिएको छ । अहिले दैनिकजसो तीन/चार सय मानिसमा सङ्क्रमण देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक सय काठमाडौँमा भेटिन थालेका छन् । त्यसले गर्दा थप जोखिम बढाएको छ ।
कुन–कुन जिल्लाले गरे निर्णय : सिराहाको लहान नगर कार्यपालिकाको आपत्कालीन बैठकले आजदेखि ९ दिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । मिर्चैया नगरपालिकाले बिहीबारदेखि नै आफ्नो क्षेत्रमा बन्दाबन्दी घोषणा गरेको थियो । आजदेखि लागू हुने गरी नुवाकोटले पनि जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीमा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्तै अत्यावश्यक र अनुमति प्राप्त सवारीबाहेक अर्को जिल्लाका सवारीसमेत आउन नपाउने गरी रोक लगाइएको छ ।
सबै नाकामा कडाइ गरी हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने निर्णयसमेत नुवाकोटको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले सङ्क्रमण रोक्न भीडभाड नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाएको बताए । “नुवाकोटको हकमा बन्दाबन्दी पनि होइन, खुकुलो पनि होइन, बीचको बाटो अपनाइएको छ, काठमाडौँबाट नजीक भएकाले पनि जोखिममा रहयो”, प्रजिअ ढकालले रासससँग भने, “जो जहाँ छन्, त्यही बस्ने, त्यहीँ काम गर्ने भन्ने हो, आर्थिक गतिविधि रोकेको भने होइन ।” उनका अनुसार समुदायमा कोरोना नजाओस् भनेर वडाध्यक्षको नेतृत्वमा कोरोना रोकथाम समूह नै बनाएर काम थालिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा आवागमनमा कडाइ गरिएको छ भने जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ । मास्क नलगाउने र स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको काम नगर्नेलाई कारवाही थालिएको काठमाडौँमा प्रजिअ जनकराज दाहालले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउने व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन्द गर्ने चेतावनी दिइएको छ । गृह मन्त्रालयले यही साउन २१ गते ७७ वटै जिल्लामा सूचना जारी गरी सङ्क्रमण रोक्न र भीडभाड कम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै २०० भन्दा बढी सङ्क्रमण्मा देखिएको जिल्लाका शहरी क्षेत्रमा समेत यातायतामा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न थालिएको छ ।